LegitVPN.com - सबै भन्दा राम्रो VPN प्रदायकहरूको तुलना गर्नुहोस्
Netflix को लागि सर्वश्रेष्ठ VPNs
चीनका लागि सर्वश्रेष्ठ VPNs
क्रोमका लागि सर्वश्रेष्ठ VPNs
टोरेन्टका लागि सर्वश्रेष्ठ VPNs
सर्वश्रेष्ठ VPN को सर्वश्रेष्ठ
LegitVPN.com मा तपाईंलाई स्वागत छ - हामी यहाँ छौं तपाईंलाई तपाईंको आवश्यकताको लागि उत्तम VPN छनौट गर्न मार्गदर्शन गर्न।
हामी केवल VPN प्रदायकहरू समीक्षा गर्दछौं जुन प्रयोग गर्न सुरक्षित र छिटो छ जसले उनीहरूको विश्वसनीयता प्रमाणित गरेको छ।
सर्वश्रेष्ठ VPN प्रदायकहरु तुलना गर्नुहोस्
वर्ष २०२० को लागि सबै भन्दा राम्रो र सब भन्दा कानूनी VPN प्रदायक
सबै समीक्षा पढ्नुहोस्
नि: शुल्क 30 दिन परीक्षण
नेटफ्लिक्स, बीबीसी र डिज्नी + हुलुको साथ उपयुक्त
Over० भन्दा बढी देशहरू
कुनै लग नीति
NordVPN साइट भ्रमण गर्नुहोस्
ExpressVPN साइट भ्रमण गर्नुहोस्
सस्तो VPN त्यहाँ छ
Surfshark VPN साइट भ्रमण गर्नुहोस्
नि: शुल्क 45 दिन परीक्षण
CyberGhostVPN साइट भ्रमण गर्नुहोस्
नि: शुल्क 31 दिन परीक्षण
१ 2000,०० भन्दा बढी सर्भरहरू
PureVPN साइट भ्रमण गर्नुहोस्
स्ट्रि -्ग-उपयुक्त VPNs को साथ भू-प्रतिबन्ध सजीलो अनब्लक गर्नुहोस्। तपाइँ मार्फत मार्गदर्शन गर्न हामी एक सरल लेख सेटअप गर्दछौं।
क्रोम संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको ब्राउजर हो। यो तपाईको साइबरसुरक्षा र VPN उपकरणको साथ अज्ञात रहन साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले टोरेन्टहरू र पियर-टु-पियर सफ्टवेयरको साथ सावधान हुनु आवश्यक छ। हामी गोपनीयताका लागि VPN प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं।
विश्वव्यापी वेबको सर्फिंगमा आउने नीतिमा चीन कडा कडा छ। पर्यटकहरूका लागि यो वास्तवमै कष्टकर हुन सक्छ।
VPN निजी भर्चुअल नेटवर्क पनि भनेर चिनिन्छ केहि तपाईंले सुन्नुभएको हुन सक्छ। VPN एक सफ्टवेयर हो जसले रिसीभर र प्रेषकको बीचमा जडान सुरक्षित गर्दछ। यसले तपाईंको सार्वजनिक यातायात अज्ञात बनाउँछ। धेरै व्यक्तिहरू यसलाई अतिरिक्त गोपनीयता र अज्ञातताको लागि प्रयोग गर्दछन् तर प्राय: यसलाई geoblock लाई बाइबस गर्न प्रयोग गरिदैछ जुन सरकारले सेट गरेको हुन सक्छ।
साथै धेरै स्ट्रिमिंग सेवाहरू नयाँ फिल्महरू र संयुक्त राज्य अमेरिकामा श्रृंखलाहरू प्रकाशित गर्दछन् उदाहरणका लागि तिनीहरू तपाईंको देशमा अन्त हुनु अघि।
VPN का साथ तपाईं यूएसए द्वारा प्रदान गरिएको सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि वेब सर्भरले सोच्दछ कि तपाईं अमेरिकामा हुनुहुन्छ।
सही वीपीएन-सेवा छनौट गर्दा मैले के गर्नु पर्छ?
त्यहाँ सयौं VPN हरू छन् तर हामी केवल शीर्ष व्यक्तिहरूसँग तुलना गर्छौं। तिनीहरू मध्ये धेरैले झूटा प्रतिज्ञाहरू दिन्छन कि उनीहरूले कहिले पनि डेलिभर गर्न सक्दैनन, हामी केवल VPN हरूलाई समर्थन गर्दछौं जुन लामो समयदेखि आएको थियो र सुरक्षा उद्योगमा प्रख्यात छ। २०१ 2017 मा धेरै अनुसन्धानहरूले देखाए कि धेरै व्यक्तिहरू एन्ड्रोइड आधारित निःशुल्क VPNs दुरुपयोग गर्दै छन् जसले पीडित प्रणालीमा अप्रबन्धित पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछन्।
त्यहाँ कुनै कानूनी फ्रि vpns छैन, केवल निःशुल्क परीक्षणहरू र तिनीहरू यो पृष्ठको शीर्षमा फेला पार्न सकिन्छ।
कसरी थाहा पाउने एक VPN कानूनी छ?
तपाईंले यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले पहिले नै सबैभन्दा सुरक्षित VPN जडानहरू परिक्षण गरेका छौं जुन विश्वभरका वास्तविक विश्वासिलो कम्पनीहरू द्वारा चल्दछन्।
VPN धीमा नेटवर्क गति छ?
केहि केसहरूमा यो सत्य हुन सक्छ। हामीले सयौं बिभिन्न VPN प्रदायकहरूको परीक्षण गर्न सकेका छौं जसले महत्वपूर्ण सम्पत्तीहरू नगरी उत्तम प्रदर्शन प्रदर्शन गर्न सक्दछ। हामीले उनीहरूलाई खेलहरू र टोरेन्टि testedमा पनि परिक्षण ग see्यौं कि उनीहरू वास्तवमै उनीहरूले भनेको कुरा हो कि भनेर।
के VPN इन्टर्नेट सर्फिंग सुरक्षित छ?
पक्कै। जब तपाईं VPN प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं पूर्ण रूपमा अज्ञात र सुरक्षित हुनुहुन्छ। कसैलाई थाहा छैन तपाईं के गर्नुहुन्छ, तपाईं को हो र तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ।
के VPN ले भाइरस र ट्रोजीन्स हटाउँछ?
दुःखको कुरा होईन। VPN हरू प्रायः एन्टिभाइरसका रूपमा चिनिन्छन् तर तिनीहरू हुँदैनन्। तिनीहरू केवल वर्ल्ड वाइड वेबमा तपाईंको जडानहरू सुरक्षित गर्छन्। ती फाइलहरूले तपाईंलाई डाउनलोड गर्ने फाइलहरू वा तपाईंले भ्रमण गर्ने पृष्ठहरूबाट उनीहरू तपाईंलाई सुरक्षा गर्न सक्दैनन्।
के मैले VPN बन्द गर्न आवश्यक छ जब म यसलाई प्रयोग गर्दिन?
हैन धेरै व्यक्ति यसलाई गोपनीयता अधिकतम बनाउन सधैं राख्छन्। जब फोन र मोबाइल उपकरणहरूमा यो ब्याट्री खपत हुन सक्छ।
VPN सेवा कसरी प्रयोग गर्ने?
VPN प्रयोग गर्न सजिलो र छिटो छ, यो सरल चरणहरूको साथ सुरू हुन्छ।
तपाईंको आवश्यकताको लागि उपयुक्त VPN खोज्नुहोस्। हामी तपाईंलाई यो अंशका साथ मद्दत गर्दछौं ताकि तपाईं आफैले समय खपत अनुसन्धान गर्नुपर्दैन, किनकि हामीले VPN प्रदायकहरूको सबै परीक्षण गरिसकेका छौं।
एकचोटि तपाईंले VPN खरीद गर्नुभयो तपाईं चाहानुहुन्छ तपाईंको प्रमाणहरू प्राप्त गर्नुहोस्। यस पत्यारपत्रको साथ तपाईंको VPN प्रदायक वेबसाइटमा लग ईन गर्नुहोस् र तपाईंले चाहनुभएको उपकरणहरूमा अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्। यो ल्यापटप, मोबाइल फोन वा डेस्कटप हुन सक्छ। तपाईं ती सबैमा यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईले सफ्टवेयर स्थापना गर्नुभयो यो समय यसलाई सुरूवात गर्ने र तपाईको मनपर्ने स्थानमा जडान गर्ने समय हो।
VPN ले कसरी काम गर्दछ?
यो स्थापना र प्रयोग गर्न कति सजिलो छ हेर्नुहोस्। केवल मुश्किल भागले तपाईंको केसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त VPN खोजिरहेको छ।
साइबरसुरक्षा समाचार र प्याचहरू
सिस्को र फायरपावर भेद्यता २.23.7.2020..XNUMX.२०२०
सिस्को र फायरपावर प्रयोग गर्ने सबैले आफ्नो ड्राइभरहरू तुरून्त अपडेट गर्नुपर्दछ। आलोचनात्मक कमजोरी भेटियो।
हामी LegitVPN.com मा को हौं
हामी व्यक्तिहरूको समूह हो जुन दशकौं देखि साइबरसुरक्षा उद्योगमा छ। हामी अनलाइन गोपनीयता र व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्नमा रुचि राख्छौं। त्यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी प्रत्येकले अन्तर्क्रियामा राख्नु पर्छ। VPN हरू आफुलाई फेरि साइबर अपराधमा सुरक्षित राख्नको लागि सब भन्दा राम्रो र सजिलो तरीका हो। हामीलाई थाहा छ त्यहाँ धेरै फरक VPN प्रदायकहरू हुन सक्छन् केवल केहि अवैध उद्देश्यका लागि। त्यसकारण हामी यहाँ छन तपाईलाई गाइड गर्न सबै भन्दा सुरक्षित र VPN खोज्न।
VPN हरू केको लागि हो?
VPN (भर्चुअल निजी नेटवर्क) मुख्य काम भनेको तपाईको इन्टर्नेट-सुरक्षा स्तर उच्च राख्नु तपाईंको जडान टनेलिंग गर्दै र सम्भावित ह्याकरहरूबाट तपाईंको IP- ठेगाना लुकाउनु हो।
भीपीएन जियोब्लक सामग्री पहुँच गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै अन्य देशहरू स्ट्रिमहरू र टिभी-च्यानलहरू हेर्दै।
तपाईले बेनामी र सुरक्षित जडानको मर्मेट गर्दा तपाईं इन्टरनेटबाट पनि डाटा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
इन्टर्नेट सुरक्षा एक चीज हो जुन हामी सबैले ख्याल गर्नु पर्छ। साइबर अपराध निरन्तर बढ्दै गइरहेका छन् र बढ्दो आक्रमणहरू प्रत्येक दिन अवतरण भइरहेका छन्।
धेरै विशिष्ट आक्रमण Ddos (सेवाको अस्वीकृत अस्वीकार) हो जसले तपाईंको जडान वा क्लासिक डाटा उल्लंघन बिच्छेद गर्दछ जहाँ तपाईंको व्यक्तिगत डाटा खराब हातहरूमा चुहिन सक्छ।
तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न तपाईंले VPN प्रदायकहरू प्रयोग गर्नु पर्छ जुन सुरक्षित, छिटो र सुरक्षित छ।
हामी व्यक्तिहरूको समूह हो जुन हाम्रो र साथीहरूको गोपनीयतामा चासो राख्छ। यसको लागि उत्तम तरिका भनेको उचित VPN पाउनु हो। फरक VPN प्रदायकहरूको परीक्षण र तुलना गरेर हामी उपभोक्ताहरूलाई अझ राम्रो निर्णय लिन मद्दत गर्न सक्छौं।
साइबरगोष्ट VPN समीक्षा
को लागी उत्तम VPNs
सिस्को आसा र फायरपावर जोखिम
२०२० LegitVPN.com - सबै भन्दा राम्रो VPNs को